जोन सीना डाइट - WWE सुपरस्टार को फिटनेस को रहस्य के हो? - Wwe
जोन सीना डाइट - WWE सुपरस्टार को फिटनेस को रहस्य के हो?
व्यायाम र एक स्वस्थ आहार, एक सुई र धागा जस्तै सँगै जानुहोस्। स्वास्थ्य, एक राम्रो संगठित र गुणस्तरीय पोषण योजना बिना, मात्र काम गर्दैन।
जोन सीना को एक पेशेवर कुश्ती इतिहास मा सबैभन्दा प्रभावशाली देखिने फिजिक्स को एक छ र यसको लागी धेरै क्रेडिट को सन्तुलन को श्रेय दिनु पर्छ कि उनी आफ्नो कठोर कसरत र गुणस्तरीय खाना को सेवन को बीच हासिल गर्न मा सक्षम छन्, एक विशेष आहार को रूप मा योजना।
सीनाले बुझ्दछ कि यो मात्र शारीरिक व्यायाम भन्दा बढि लिन्छ शारीरिक फिटनेस सम्म पुग्न र सही मात्रा मा खाना संगै, एक निर्दोष शरीर प्राप्त गर्न को लागी एक प्रमुख कारक हो। जोन को आहार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो कि उसलाई एक अभूतपूर्व आकार मा हुन मद्दत गर्दछ, र उनी अनुशासन कडाइ संग उही पालन गर्न मा गर्व गर्दछन्।
जोन फेलिक्स एन्थोनी सीना २३ अप्रिल १7on मा पश्चिम न्युबरी, म्यासाचुसेट्स मा जन्मिएको थियो। जोन सीना १२ बर्ष को एक धेरै प्रारम्भिक उमेर मा वजन प्रशिक्षण शुरू गरे। हाई स्कूल मा आफ्नो प्रारम्भिक वर्षहरु को दौरान, सीना शारीरिक नमूना बाट टाढा थियो पछि उनी बने। उहाँ अविश्वसनीय रूपले दुबला हुनुहुन्थ्यो र आफ्नो जूनियर उच्च बर्ष को दौरान मात्र 120 पाउण्ड तौल।
जे होस्, जब सम्म उनी स्नातक भए, उनी २३५-२५० पाउण्ड सम्म बल्क गरे। WWE मा दृश्य मा फस्नु अघि, जोन सीना शरीर सौष्ठव मा एक क्यारियर को लागी। आफ्नो ढिलो किशोरावस्था को समयमा, उहाँले पेशेवर प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्नुभयो, विभिन्न शरीर सौष्ठव शो मा भाग लिईरहनुभएको छ।
यस अवधि को दौरान, उनको कसरत विशेष गरी मांसपेशिहरु को निर्माण र आकार प्राप्त गर्न मा ध्यान केन्द्रित। पेशेवर कुश्ती को दुनिया मा उनको संक्रमण पछि, १५ पटक WWE वर्ल्ड हेवीवेट च्याम्पियन आफ्नो मूल मांसपेशी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम बाट एक सहनशीलता, एथलेटिकवाद र चपलता मा सुधार संग सम्बन्धित एक मा सारियो।
जब उनी बुढो भए, उनको लक्ष्य दुखाइको प्रतिरोध गर्ने र चोटहरु बाट निको हुने थियो।
यहाँ पढ्नुहोस्: जोन सीनाको कसरत दिनचर्या के हो?
जोन सीना आफ्नो शरीर सौष्ठव दिनहरु को दौरान
जोन सीना आफ्नो कसरत बिभिन्न दिनहरुमा विभाजित गर्दछ। प्रत्येक दिन बिभिन्न शरीरका अंगहरुमा केन्द्रित हुन्छ। उनको प्रशिक्षण पद्धति को प्रकृति परिवर्तन भएको छ र समय संगै विकसित भएको छ। सीनाले स्वीकार गरे कि, उनी जति बूढो भइरहेकी छिन्, उनको शरीरको प्रतिक्रिया दिने तरिका परिवर्तन भएको छ।
उनले ती परिवर्तनहरु लाई अनुकूलन को आवश्यकता मा जोड दिए, जो उनको अभ्यास को दौरान प्रयोग गरीएको केहि विधिहरु मा प्रतिबिम्बित।
यो पनि पढ्नुहोस्: ट्रिपल एच कसरत: कसरी खेल उनको शरीर बनाए राख्छ?
जोन सीना को आहार, एक महत्वपूर्ण पक्ष को रूप मा, काम को रूप मा उहाँले जिम मा राख्नुहुन्छ जब यो आकार मा राख्न को लागी आउँछ। उनी जिम भित्र मेहनत गरीरहेछन्, उनको आहार शासन उनको सही फ्रेम को पछाडि धेरै सफलता को लागी खाता। निम्न खाद्य वस्तुहरु को विस्तृत सूची हो कि Cenation को नेता एक दिन मा समय को बिभिन्न बिन्दुहरु मा उपभोग गर्दछ:
ब्रेकफास्ट E अण्डा, २ पूरै अण्डा, किशमिश र एप्पल सॉस संग १०० ग्राम ओटमील (एक जिम पूरक को रूप मा प्रोटीन बार। जिम पूरक। प्रोटीन बार। लंच १०० ग्राम ब्राउन राइस, २ कुखुराको स्तन र सब्जियां। नाश्ता।गहुँ गहुँ पिटा रोटी टूना संग। माछा बेलुका र मट्ठा प्रोटीन शेक।रातको खाना ब्राउन चावल/पास्ता, सलाद, सब्जी, ग्रील्ड चिकन/माछा। पूरक।
सीना को आहार योजना मोटो रूप मा एक दिन मा सात भोजन को शामिल छ। ती खानाहरु प्रोटीन मा धेरै धनी छन्। यो राम्रो संग सन्तुलित र राम्रो संग संचालित भोजन योजना उसलाई आवश्यक र पर्याप्त खनिज, भिटामिन र प्रोटीन, कि शरीर को रखरखाव को लागी अनिवार्य रूप बाट प्रदान गर्दछ।
उनको नाश्ता धेरै अण्डा भारी छ र उनको प्रारम्भिक आहार को एक महत्वपूर्ण रूपहरु। दलिया उसलाई फाइबर को उच्च स्तर, उच्च प्रोटीन र बोसो को कम स्तर संग प्रदान गर्दछ। एक सजीलो बोक्ने प्रोटीन पट्टी उसलाई आफ्नो शरीर मा प्रोटीन को एक अतिरिक्त खुराक मा चुपचाप मद्दत गर्दछ
दोपहर को भोजन मा प्रोटीन र अन्य पोषक तत्वहरु को फरक स्तर संग प्रदान गर्दछ। तरकारी र कुखुरा उनको धनी आहार को एक महत्वपूर्ण भाग हो। उनको साँझको खाना धेरै हल्का छ र मात्र प्रोटीन शेक र एक केला को हुन्छ। यसले उसलाई ताजा हुन मद्दत गर्दछ र उसको शरीर केहि समय को लागी स्वस्थ हुन दिनुहोस्।
तरकारी र कुखुरा एक पटक फेरी एक उपस्थिति बनाउन, यो रात को खाना को समयमा, जो जोड्दछ, उसको पहिले नै प्रोटीन केन्द्रित आहार योजना को लागी अझ धेरै प्रोटीन। उनी ब्राउन राइस/पास्ता र सलाद पनि खान्छन्। क्यासिन प्रोटीन शेक उसलाई आफ्नो तौल कायम राख्न र शक्ति को एक ठूलो स्तर प्राप्त गर्न मा मद्दत गर्दछ।
आहार/पोषण योजना प्रत्येक चरण मा, पोषण को एक विशेष स्तर को मांग गर्दछ। सीना धार्मिक रूपमा पछ्याउन सबै गर्न सक्छिन्।
सीना को पकड वाक्यांश हुन सक्छ 'तपाइँ मलाई देख्न सक्नुहुन्न' तर यो यस्तो निर्दोष फ्रेम लाई बेवास्ता गर्न गाह्रो छ
सामान्य ढाँचा यो हो कि यो सीना शामिल छ, हप्ता मा छ दिन को लागी यो आहार चार्ट को पालन र एक दिन एक 'धोखा दिन' हो। धोखा दिन मूलतः सीना स्वतन्त्रता को लागी उनी जे चाहन्छन् र खुसी खान को लागी अनुमति दिन्छ। जब उनको मनपर्ने खानाहरु को बारे मा सोधियो, सीना को भन्न को लागी निम्न थियो:
डेभ meltzer5तारा कुश्ती खेल
मलाई स्टेक मन पर्छ। मलाई सामन मन पर्छ। म पूरै अण्डा, नट, डेली मासु, सेम र सब्जियों को सबै प्रकार मनपर्छ। त्यो सामान्यतया मेरो आहार को कब्जा छ। मलाई खुर्सानी मन पर्छ, र यी सबै चीजहरु छन् कि मँ हुन सक्छु।
आफ्नो मनपर्ने 'लोड दिन' खानाहरु मा विस्तार, सीना यसो भन्नुभयो:
फ्रेन्च टोस्ट, ब्लूबेरी muffins, केले वा पिज्जा को एक टुक्रा। पोषण योजनाको साथ म छु, हप्ताको एक दिन मेरो 'लोड दिन' हो जहाँ म जे चाहन्छु खान सक्छु।
जोन सीनाले दुई महिना लामो पोषण र व्यायाम कार्यक्रम 'BodyChange' भनिन्छ। यहाँ सीना को एक भिडियो BodyChange को पोषण योजना को वर्णन छ:
यो स्पष्ट छ कि जोन सीना यस तथ्य को बारे मा धेरै सचेत छ कि आहार प्रतिबद्धता र धैर्य को एक धेरै आवश्यक छ, तर पुरस्कार यो फसल शायद प्रेरित गर्न को लागी पर्याप्त छ। उहाँले एक आहार योजना, जो समय मा धेरै जटिल हुन सक्छ, धेरै सरलीकृत हुन सक्छ र ईमानदारी मा पूर्व निर्धारित लक्ष्यहरु लाई बाँच्न को लागी आवश्यक छ।
नवीनतम को लागी WWE समाचार , प्रत्यक्ष कवरेज र अफवाहहरु हाम्रो Sportskeeda WWE सेक्सन भ्रमण। साथै यदि तपाइँ एक WWE लाइभ घटना मा भाग लिइरहनुभएको छ वा हाम्रो लागि एक समाचार टिप छ हामीलाई लडाइँ क्लब (at) sportskeeda (डट) com मा एक ईमेल ड्रप गर्नुहोस्।
जब तपाइँ जान्नुहुन्छ कि यो समाप्त भयो
5 चीजहरु जब बोर हुन्छ
पुरुषहरु एक सम्भावित पत्नी मा के खोज्छन्
मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथीले मलाई झुट बोली